नेपाल आज | ‘अब एचआइभी सर्दैन, आयु स्वस्थ मानिस सरह’
‘अब एचआइभी सर्दैन, आयु स्वस्थ मानिस सरह’
डा. तारानाथ पोख्रेल
एचआइभी/एड्सले ८० को दशकमा विश्वभर आतंक फैल्यायो । सन् १९८८ मा एचआइभीको प्रथम संक्रमित व्यक्ति फेला परे । ३१ वर्ष यता नेपालमा पनि एचआइभी जानलेवा संक्रमण मात्रै भएन डरलेवा संक्रमणका रुपमा पनि देखा पर्‍यो । तर पछिल्ला दिनहरुमा उपचार, औषधिहरुको उपलब्धताले यो संक्रमणविरुद्ध आशालाग्दा सफलता प्राप्त भएका छन् ।
एचआइभी/एड्स पूर्ण विसेक हुँदैन । शरिरबाट भाइरस सदाको लागि सामाप्त गर्ने विधि पत्ता लागेको छैन । तर यो संक्रमणविरुद्धका धेरै औषधिहरुले संक्रमितलाई सामान्य मानिससरह जीवन दिन सकिन्छ । हाल नेपालमा ३१ प्रकारका औषधिहरु प्रयोग भइरहेका छन् । संक्रमितको अवस्था वा भाइरल लोडको अवस्था हेरेर औषधि चिकित्सकहरुले सिफारिस गर्दछन् । सामान्यतः संक्रमितहरुले एकदेखि तीनवटा औषधि नियमित सेवन गरे पुग्छ ।
एचआइभीविरुद्धका औषधिहरुको प्रभावको चर्चा गर्ने हो भने केही अनौठा र आश्चर्यलाग्दा तथ्यहरु पनि छन् । जस्तो कि कुनै संक्रमितले नियमित औषधि सेवन गर्ने हो भने केही समयपछि उबाट अर्को व्यक्तिमा एचआइभी नसर्ने अवस्थामा पुग्छ । नियमित औषधि सेवन गरिरहेको व्यक्तिको जाँच पछि चिकित्सकहरुले उबाट ‘अर्को व्यक्तिमा भाइरस सर्दैन’ भन्न सक्छन् । यो भन्दा ठूलो चमत्कार के होला ?
जनसंख्याको १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढीमा एचआइभी संक्रमण भयो भने त्यसलाई महामारीको रुपमा लिइन्छ । नेपालको हकमा स्थिति सुधारोन्मुख छ । नेपालमा सन् २०१८ सम्ममा अनुमानित (वैज्ञानिक विधिबाट गरिएको अनुमान) ३१ हजार २२ संक्रमित छन् । जुन जनसंख्याको ०.१५ प्रतिशत हो । अर्थात नेपालमा एचआइभीविरुद्धको लडाईं विजयोन्मुख छ ।
तर केही निश्चित समूहका मानिसमा संक्रमण दर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जस्तो कि यौनकर्मी, सुईबाट लागूऔषधि लिने समूह, पुरुष समलिंगी, भारतमा काम गरेका फर्केकाहरु, कैदीबन्दी आदिमा एचआइभीको संक्रमण उच्च छ ।
एचआइभीले कुनै पनि बर्ग, लिंग, पेशाका मानिसलाई छाडेको भने छैन । फिल्म सेलिब्रेटीदेखि राजनीति गर्ने हुन् वा मजदुरी गर्नेदेखि गृहिणीसम्ममा संक्रमण छ । रोगले भन्दा पनि सामाजिक विभेदको त्रासका कारण धेरैले गुपचुप औषधि सेवन गर्छन् । एचआइभीबाट अल्पआयुमा अब कसैले पनि मर्नु पर्दैन । तर सामाजिक तिरष्कार हटाउन सकिएको छैन । अझ गरिब र निमुखालाई संक्रमण भयो भने उनीहरु बढी नै तिरष्कारको सिकार हुन्छन् ।
एचआइभी संक्रमण भएको चाँडै थाहा पाउने हो र औषधि शुरु गरिहाल्ने हो भने त्यस्तो संक्रमितले सामान्य मानिस सरह पूरा जीवन बाँच्न सक्छ । आफ्ना जीवनका सबै सपनाहरु पूरा गर्न सक्छ । नेपालमा संक्रमण भएको १८ वर्षसम्म औषधि नखाइ त्यसपछि खान थालेको दावी गर्नेहरु पनि छन् ।
कुनै पनि भाइरसले चाँडो चाँडो आफ्नो रुप परिवर्तन गर्छन् । एचआइभीको पनि त्यस्तै हुन्छ । औषधि नियमित भएन भने भाइरसले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरेर औषधिसँग रेसिस्टेन्ट हुने क्षमता विकास गर्छ । यसकारण औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्छ भनिएको हो ।
(डा. पोख्रेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । पोख्रेल राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक हुन् ।)
प्रचण्डमाथि नेमकिपाका अध्यक्ष विजुक्छेंले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप, जोडियो भारतको नाम!